यस्ता श्रीमती जसले श्रीमानलाई कहिल्यै प्रगती गर्न दिनैनन् ! – Jagaran Nepal
लोग्ने स्वास्नीको झ गडा परालको आगो’ भन्ने त भनाई नै छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच सामान्य ठाकठुक पर्नु दाम्पत्य सम्वन्धकै एउटा हिस्सा हो । तर, जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने ‘हेपेर’ बोल्ने ‘चिच्याएर’ बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन !
तपाइलाइ सुन्दा पनि अचम्म लाग्याे हाेला तर याे साँचाे हाे । वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरको हाडमा जवानीको र’हस्य लुकेको पत्ता लगाएका छन् । हाडहरूमा रहेको विशेष किसिमको हर्मोनको मात्रा सही भएमा बुढ्यौलीले छुन नसक्ने अनि स्मरणशक्ति पनि कमजोर नहुने बताएका छन्
दलितसँग विवाह गरेको भन्दै इलामको माई नगरपालिका–२ दानाबारीकी यामकला आचार्य विकले बुबाको अन्तिम संस्कार पनि परिवारसँगै गर्न पाइनन् । सोमबार राति निधन भएका बुबा चन्द्रप्रसादको किरिया परिवारसँगै बस्न माइती पक्षले नदिएपछि उनी छुट्टै बसेकी छिन् । यामकलाले १२ वर्षअघि दलित समुदायका रत्नबहादुर विश्वकर्मासँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । उनलाई अहिलेसम्म माइतीले बोलाएको छैन । बुबाको दाहा संस्कारका लागि जाँदा पनि उनले अपमानित हुनुपर्‍यो ।